Leo izy ireo. Tsy afaka mahita talenta an-trano mahay izy ireo na mamokatra famokarana fanampiny (na fahaiza-manao) avy amin'ireo mpiasa efa misy azy ireo, kanefa fantatr'izy ireo fa afaka ary tokony hanao be lavitra kokoa izy ireo.
Fahita izany. Amin'ny lafiny maro dia famaizana tokana ny marketing amin'ny mailaka. Sarotra ny mailaka. Saingy amin'ny fomba hafa dia mitaky talenta sy faharetana tsotra izao. Sarotra ny mahita ireo zavatra takiana ireo amin'ny loharano tokana na ekipa tsy miasa loatra.
Ankoatry ny fahaiza-mamorona, ny fahaizana teknika ary ny herin'ny fandresen-dahatra (ilaina izany rehetra izany raha te handresy ny lalao mailaka ianao), mpiara-miasa amin'ny marketing amin'ny mailaka ihany koa no mitondra ny traikefa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny toby mpanjifa isan-karazany. Ity dia loharano tsy manam-petra ho an'ny hevitra vaovao izay manome antoka fa tsy ho lasa iharan'ny "eritreritra vondrona" ny ezaka ary atao avo lenta ny dolara rehetra laniana.
Rehefa manapa-kevitra ny hamoaka ny marketing amin'ny mailaka azy ireo na hitazona azy ao an-trano dia maro tamin'ireo mpanjifanay no nijery voalohany ny dolara raha misy dikany izany. Mitandrina izy ireo fa tsy adala.
Andao hatrehana izany, mitaky fotoana ny serivisy marketing mailaka. Noho izany, amin'ny endrika iray na hafa, fotoana no loharanon'ny fandaniana amin'ny mpivarotra.
Tsy afaka miteny amin'ny masoivoho rehetra aho fa nandany ny volana niaraka tamin'ny fandevenana ny endrikay sy ny API. Fantatsika ny tanjany, ny fahalemeny ary ny fetrany. Nanamboatra fanentanana an'arivony izahay ary nanolotra serivisy ho an'ny consultant ho an'ny mpivarotra B2C sy B2B maro. Io dia miteraka fahombiazana izay azo avy amin'ny traikefa ihany. Ny fahombiazana dia midika hoe kely ny fotoana, izay midika hoe kely ny vidiny.